France: Wargeys soo daabacay kartoono cusub oo nabiga (scw) wax looga sheegayo oo xafiiskiisa la gubay | Somaliska
Wargeys ka soo baxa dalkaasi Faransiiska oo lagu magacaabo Charlie Hebdo ayaa xafiiskiisii dab la qabadsiiyay ka dib markii ay qorsheynayeen in ay soo daabacaan cadad ay sheegeen in uu nabiga (scw) tifaftire ka yahay halkaasoo ay ku soo sawireen kartoomo lagu maadeysanayo nabigeena suuban (scw) iyo shareecada Islaamka.
Xafiiska wargeyska ayaa waxaa lagu tuuray shidaal ka dibna dab ayaa qabsaday oo waxaa gubtay dhamaan wixii agab yaalay gudahiisa. Arintaan ayaa dhalisay dood balaaran oo ku saabsan xoriyada saxaafada iyo diinta. Wargeyska ayaa lagu eedeeyay in uu daandaansi ku haayo Muslimiinta iyadoo aysan ahayn markii ugu horeysay ee ay soo daabacaan sawiro nuucaan ah.
Dowlada Faransiiska ayaa taageertay ficilada wargeyska iyaga oo hada ku daba jira dadkii geystay weerarka. Waxaa sidoo kale la jabsaday bogga internetka ee wargeyskaasi uu leeyahay. Si kastaba ha ahaatee ficilada wargeyska ayaa waxaa cambaareeyasy qaybo ka mid ah bulshada Faransiiska qaasatan Muslimiinta wadankaasi.
Nabigeena Mahamed binu Cabdulaah binu Cabdulmudhalib binu Haashim binu Cabdul manaaf csw.
Waa Midka u sharaf badan Dad oo dhan.
Waa midka ugu hor gali doono Janada,
Waa midka Shafaacadiisa na anfici doonto
Waa midka ugu sharaf badan insi iyo jini oo dhan.
Waa midka Alle soo doortay
Waa Nabigeena aan wada jecleen walahi
Gaal ma ahan kuwa hada nool, kuwa caayda ugu horeeyay
ee Nabigeena isaga oo nool ayee gaalo dhahaayeen waa Saaxir waa beenloow waa sidaas iyo sidaas,
waxaana ka mid ah Nabiga adeerkiisa ee ABII LAHAB
iyo Ninka kale ee aayado badan quraanka kuso dagtay ee ah Wuliid binu Muqiira oo ah Qaalid binu waliid aabhiisa.
si kasta ha ahaato Nabigeena waxuu naga mudanyahy in aan difaaco xitaa hadii uu dhintay
Wasqaankaas Wargeyska ah shalaay wey u danbeesay hadii aduunka nolol kasta oo raaxo oo Amni leh ku helo.
xafiiska oo la gudo waa ok, lkin waxa kasii fcn isaga naftiisa sidaas lagu sameeyo
WAA MAXAY DIMUQRAATI?
. In diinta la caayo ma dumuqraati baa,!!!!
Hmm…..Jawaabtaan laga yaabaa sanado badan oo badan inee qaadato in sax lagu jawaabo,
lkin lkin Sheedhaan aya shaqeesanayo, oo doonayo in kaligiisa Janabo galin, hahahaha….
s.c.w dhammaan ummadda muslimka ah waan salaamayaa kaddib waxaan u shegayaa in la dandaansanaayo muslimiinta lana tijaabinaayo oo la rabo bal sida ay ka yeelayaan haddii nabiga suuban scw wax laga sheego hadday iska aamusaan waxyaabo ka daran ayaa la sameynayaa hadday laakiin ficillo sameeyaan oo waliba wax ku ool ah lagu dagdagi maayo hadda ka hor waad ogaydeen in denmark iyo sweden laba nin ay af-lagaado u,geeysteen nabiga suuban scw . waxaan idiin sheegayaa qoorta ha laga gooyo qofkii aflagaado ugaystaa diinteena suuban
ilahay ha cadabo qofkii wax xun ku matala nabigena suban naxariis iyo nabad galyo ay korkisa ahatay
wax kasta o ay dhahan galadan ilahay ayaa uga arayo hadii aysan muslimintu uga arin .
mantay farxadayda lama so kobi karo wlhi madama la gubay musqushii galku uu nabi muxamed scw ku afla gadheynayey
oo dhan waxan kasi jacelan laha manta ayadoo la i dhaho waa baqtiyeen galadii dhamantet si kastaba ha ahatee alxamudlilah ilahay awooda musliminta dhaman kor ha u qado aaaaaaaaaaaaaaamin
Haku Quus Qaataan Gaalada Cadawnimadu Caburisay ,
Allaha Muslimiintaa Danbigooda Dhaafo , Kuwii Nabiga scw Xawdkiisa ka caba Noqda Aamiin.